Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165660 times)
« Reply #370 on: December 20, 2012, 09:39:35 PM »
« Reply #371 on: January 05, 2013, 10:23:27 AM »
အဲဒီခေတ်က ကြက်တိုက်ချင်တယ်..ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြက်မရှိဘူးဆိုရင် ကြိုက်တဲ့အကောင်ကို ငှားတိုက်လို့ရတယ်... တစ်ပွဲတိုက်ပီးတိုင်း ၁၀ ကျပ်ပေးရုံပဲ..
တိုက်ကြက်မရှိဘဲ ကြက်တိုက်သန်တဲ့ သာဂိ ..အိမ်ကပိုက်ဆံတကျုံး နှိုက်ပီး ကြက်လာတိုက်တယ်....ထုံးစံအတိုင်း ကြက်ငှားတိုက်ရတာပေါ့..
ကြက်တိုက်တာ ၃ ပွဲလုံးနိုင်ရက်နဲ့ ... နောက်ဆုံးပွဲ ကြက်ငှားကြေးပေးပီးရော..... တစ်ပြားမှ မကျန်တော့ဘူးဗျ......
သူ အိမ်က ဘယ်လောက်နှိုက်ခဲ့လဲ..... သိတဲ့သူဖြေပေးပါဦး......
« Reply #372 on: January 05, 2013, 11:51:15 AM »
၁ ယောက် ၈ ကျပ်စီပေးတယ်ထား... ၈x၃=၂၄ ကျပ်....
၂၅ ကျပ်ကျတာဆိုတော့ မလောက်လို့ ၁ ကျပ်စီထပ်ပေးတော့ ..... ၁x၃ ...
၃ ကျပ် ကို .... ၂ ကျပ်က စားပွဲထိုး ဘတ်... ၁ ကျပ်ကို ၂၄ကျပ်နဲ့ပေါင်း ၂၅ ကျပ်ပေးတယ်လေ....
တစ်ယောက်စီက ၈+၁=၉ ကျပ်စီပေးတယ်...
ဘီယာတော့သောက်ချင်ဝူးဗျာ.... မိုက်မိုက်လေး တလုံးလောက်ကန်ရရင်တော့ ဆိုးဝူးဗျ...
« Reply #373 on: January 05, 2013, 12:35:02 PM »
Quote from: Pauktatcaya on January 05, 2013, 10:23:27 AM
Pauktatcaya ရေ.... လောင်းကြေး က ဘယ်လောက် ရလည်း ဆိုတာ မပါ ဘူး ဗျ... မေးခွန်း များ ကျန်ခဲ့သလား လို. ဗျာ ?
မေး ခွန်း က မှန် နေ တယ် ဆို ရင်တော့ ၃၀ လို. ဖြေ ပါ ရစေ...
အမှားကို သိတဲ့ အချိန် က အမှန် ဖြစ်တာပဲ... နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး...!
« Reply #374 on: January 05, 2013, 01:33:02 PM »
Quote from: feelforward on January 05, 2013, 12:35:02 PM
ဟာ... ဟုတ်တယ်ဗျ... sorry...
လောင်းကြေးက .. ဒဲ့ ပဲ... ကြက် ၂ ကောင် တိုက်မယ်ဗျာ... သူ ၁၀၀ ဆို ကိုယ် ၁၀၀ ထည့်... နိုင်တဲ့ကြက်ပိုင်ရှင် စား...ပေါ့ဗျာ...
သာဂိ ကြက်ငှား ...ပါသမျှ လောင်း .....နိုင် .. ကြက်ဖိုးပေး.... ကြက်ပြန်ယူလာ ...ကျန်သမျှထပ်လောင်း ...နိုင် ..ကြက်ဖိုးပေး...
နောက်တခါ ကြက်ယူ... ကျန်သမျှလောင်း ... နိုင် ...ကြက်ဖိုးပေး.....ပြောင်.....
ဟီး..ဟီး.... ဒါဆို တော်တော်လွယ်သွားဘီဗျ....
« Reply #375 on: January 07, 2013, 01:10:27 PM »
Quote from: Pauktatcaya on January 05, 2013, 01:33:02 PM
ပါသမျှ လောင်း =8.75
ပြောင် = 0
အိမ်ကယူလာတာ ၈ ကျပ် ၇၅ ပြားဖြစ်ကြောင်း
« Reply #376 on: January 07, 2013, 05:04:33 PM »
Quote from: zero0 on January 07, 2013, 01:10:27 PM
ဒက်ထိ .. ကွက်တိ ကို မှန်ကြောင်း..... ဗျား.....
« Reply #377 on: January 14, 2013, 11:50:23 AM »
မြန်မာစကားပုံမှာ မိရိုးဖလာ ဆိုတာရှိတယ် ...
အဲဒီ့ဆိုလိုရင်းကိုသိရင် ဖြေပေးစေလိုပါကြောင်း .....
« Last Edit: February 13, 2013, 01:34:35 PM by zero0 »
« Reply #378 on: January 17, 2013, 06:04:02 AM »
Q: What is the different between wife and girlfriend?
« Last Edit: January 18, 2013, 05:37:52 AM by HipHopBug »
« Reply #379 on: February 02, 2013, 01:34:24 PM »
၃=၁ (၃ ပေ ၁ ကိုက်)
၈=၁ (၈ လုံး ၁ ပြည်)
၁၀=၁ (၁၀ သံကြိုး ၁ ဖာလုံ)
၁၂=၁ (၁၂ လ ၁ နှစ်)
၁၆=၁ (၁၆ အောင်စ ၁ ပေါင်)
၂၂=၁ (၂၂ ကိုက် ၁ သံကြိုး)
၂၄=၁ (၂၄ နာရီ (၁ ရက်)